Ogaden News Agency (ONA) – Mudane Rayaale Xaamud oo khadka Teleefoonka kala qaybqaatay shirka Jaaliyadda Cape Town.
Mudane Rayaale Xaamud oo khadka Teleefoonka kala qaybqaatay shirka Jaaliyadda Cape Town.
Gudoomiyaha jaliyada faraca Cape Town halgame Maxamed shilabo ayaa furay shir lagaga hadlayay xalada Ogadenia iyo abaraha ka jira shirkaasoo ay ka soo qab galeen dhaman bulsha weynta Somaliyeed.
Gudoomiyaha ayaa ku soo dhaweyay sheekh Maxamed ugaas oo ah hoganka arimaha diinta ee faraca Cape Town ee (OYSU) isagoo halkaas ka soo jediyay wacdi diini ah oo ku sabsan bisha ramadan oo ah bil cibaado iyo sadqo bixin fa iida ay leedahay iyo abaraha ka jiro dhamaan gayiga ay dagto dadka Somaliyeed.
Ka dib waxa shirka lagu soo dhaweyay halgamaa cabdiraxman food oo in muda ah ku maqnaa Geeska Afrika gaar ahaan gobolada Somalidu ay dagaan ayaa ka war bixiyay xalada ka jirta halkaa oo indhihiisa uu ku soo arkay uuna moog yahayh in ka yar 20 cisho. Wuxuu ka war bixyay dadkaas dhibka haysta, taasoo uu ku tilmaamay inay sabab u tahay shacabka Somaliyed oo hoos tagay gumaysiga Abasiniya. Waxa uu dhahay; abarta waxa uga daran waa colaada taas oo ay hurinayso Ethiopia ugana dan leedahay dadka somaliyed in ay kala qayb qaybiso (qaybi oo xukun) iyagoo 21 sano is dalaysa Somalida, waxa hubka iskugu dhibayana ay tahay Itobiya oon jacelayn in Somalia ay dagto oo ay noqoto dowlad awood ku leh Geeska Africa siday ahaan jirtay.
Waxa sidoo kale lagu soo dhaweeyay madasha shirka Nuur Cabdi salaan oo ka hadlay xalada Ogadenia gaar ahaan gudaha waxa ka jiro ee colaada iyo abara ah. Waxa uu ka hadlay abaraha Ogadenia ka jira isagoo tusaale ahaan u soo qaatay in wax baabur ah aanu Somalia ka soo galin, baabuurtaas oo u sahli jirtay shacabka Ogadenia maciisahadooda in ay aad u jabanaato, ayuu gumaysiga ugu tala galay in maciishada ay aad u sii kacdo. Wuxuu tusaale ka bixiyay in neefka xolha ah adhiga ah uu qiimahiisu yahay 600 bir, meesha kiishka bariiska ah gaaray 800 bir. Waxuu u sii gudbay dagaalka ka socda Ogadenia inuu si xowli ah ku socdo, oo ciidanka Itobiya in ayaga in la raadsado meshii awal ay soo radsan jirtay naftood-hurayaasha. Hada ciidanka jabhadda ayaa ka awood badan 9ka gobal Ogadeniana ka dagaalama kuna awood saraya goob walba oo gumaysiga lagu weeraro.
Waxaa kaloo shirka ka hadlay mudane Cumar sheikh Cabdulaahi (soya) oo ah hogaanka abaabulka iyo warfaafinta ee OYSU, isagoo halkaas ka soo jeediyay khudbad aad u balaadhan uu kaga hadlayay ururka dhalinyarada OYSU inuu hal sano jirsaday hada wax badana qabsaday. Wuxuu tusaala ahaan u soo qadatay caalamka wadan walba oo aad tagto waxaad ka helaysaa xafiis OYSU ay ku ledahay.
Waxaa khadak telephone ka shirka kaga qab galay mudane Riyaale Xaamud oo ka mid ah madaxda sar sare ee jabhadda ONLF halkaasoo uu khudbad aad u dhaar ka jeediyay taasoo uu kaga hadlay halganka meesha uu maraayo hada iyo xornimada Ogadenia inay qof walba oo u dhashay dalka ay muqadis ku tahay inuu u dagaalamo. Mudane Rayaale waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; Gumaysiga wuxuu yaqanaa siduu dadka u kala qayb qaybiyo, kuna qaybiyo cudurka dawadiisa la la’yahay ee ah qabiilka. Wuxuu kula dardaarmay inay ka fogadaan qabiilka oo ah buu yidhi cudur xun oo dawadiisa la la yahay oo dowladii Somalia iyo shacabkii Somaliyeed sidaas u galay ay 21ka sano isku dagalayaan. Waxa uu dhahay; Itobiya waxay rabataa inay dhahdo Ogadenia waa qabiil, waxaanan idiin sheegayaa Ogadenia wa dal ee ma’ahan qabiil. Anigaba Ogaden ma ihi oo qabiil ahaan Ciise ayaan ahay, dhulkeygana waa Ogadenia, marka iska ilaaliya cudurkas dilaga ah ayuu aad ugala dardaarmay dadkii isugu yimid shirka.
Warfaafinta JOKA ee Cape Town.